Bhaibheri Rinotii Nezvekuona Zvinonyadzisira? Kutaura Nezvebonde Paindaneti Kwakaipa Here? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Korean Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mapudungun Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuPeru Myanmar Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Tzotzil Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Bhaibheri Rinotii Nezvekuona Zvinonyadzisira? Kutaura Nezvebonde Paindaneti Kwakaipa Here?
Bhaibheri haritauri haro zvakajeka nezvekuona zvinonyadzisira, kutaura nezvebonde paindaneti kana kuti zvimwe zvinhu zvakada kurerekera ikoko. Asi rinotaura zvakajeka nezvekuti Mwari anoona sei zvinhu zvinoitwa pakutsigira bonde revanhu vasina kuroorana kana kuti kuva nemaonero asina kunaka nezvebonde. Ona mamwe mavhesi eBhaibheri:
“Naizvozvo, urayai nhengo dzemiviri yenyu dziri panyika kana tichitaura nezvoufeve, zvinhu zvisina kuchena, chido chokurara nomumwe munhu.” (VaKorose 3:5) Kuona zvinonyadzisira kunotomutsa zvido zvakaipa panzvimbo pokuzviuraya. Kuona zvinonyadzisira kunoita kuti munhu ave asina kuchena pamberi paMwari.
“Munhu wose anoramba akatarira mukadzi zvokuti anomuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.” (Mateu 5:28) Mifananidzo younzenza inokuchidzira pfungwa dzakaipa dzinozoita kuti munhu aite zvinhu zvakaipa.
“Ufeve nezvinhu zvisina kuchena zvemarudzi ose kana kukara ngazvirege kumbotaurwa nezvazvo pakati penyu.” (VaEfeso 5:3) Hatifaniri kunakidzwa nokutaura zvinhu zvounzenza kunyange kuzviona kana kuzviverenga.
“Mabasa enyama anooneka, uye ndeaya, ufeve, kusachena, . . nezvinhu zvakaita seizvi. Ndiri kufanokunyeverai pamusoro pezvinhu izvi, sokufanokunyeverai kwandakamboita, kuti vane tsika yokuita zvinhu zvakadai havazogari nhaka youmambo hwaMwari.” (VaGaratiya 5:19-21) Vanhu vanoona zvinonyadzisira, vanotaura nezvebonde paindaneti, kana pafoni kana vanotumirana mameseji enyaya dzakadai, kuna Mwari vanhu ivava vanonzi vakasviba uye havana tsika. Kana tikaramba tichiita zvinhu zvakadaro, tinogona kupedzisira tisingachafarirwi naMwari.
Kuona zvinonyadzisira: Mavhidhiyo, mapikicha kana kuti zvinhu zvakanyorwa zvinoita kuti munhu anzwe achida bonde.
Kutaura nezvebonde paindaneti kana pafoni: Kutaura, kunyora mameseji kana kutumira mapikicha zvakarerekera kunyaya dzebonde nechinangwa chokuda kuti munhu anzwe achida kuita bonde.
Zvinonyadzisira Hazvikuvadzi Here?
Kuona zvinonyadzisira kunokanganisa sei vanhu uye mhuri?
Pane vanhu vanoita kuti ude kutumira mameseji anonyadzisira here? Kuzviita kwakaipirei? Ingori nzira yokutamba kworudo isingakuvadzi here?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Bhaibheri Rinotii Nezvekuona Zvinonyadzisira? Kutaura Nezvebonde Paindaneti Kwakaipa Here?
ijwbq nyaya 59